Beats Fit Pro ကို US ပြင်ပတွင် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ငါ mac ကပါ။
Beats Fit Pro ကို US ပြင်ပတွင် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
Tony Cortes | | ပစ္စည်းများ
လွန်ခဲ့သည့်လအနည်းငယ်က Apple သည် ကြိုးမဲ့နားကြပ်များကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Beats Fit Pro အတွက်ဒါပေမယ့် ထုတ်လုပ်တဲ့ ယူနစ်တွေ ရှားပါးလာတာကြောင့် US မှာသာ ရရှိနိုင်ပြီး ယနေ့အချိန်အထိ စပိန်အပါအဝင် အခြားနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည် ယခု Apple Store ဝဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ပြီး ပေးပို့ချိန်ဖြင့် ၎င်းတို့ကို ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါပြီ။ လကုန်မှာ. အတိအကျ ပြောရရင် ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့၊ အားကစားလုပ်ရင်း သီချင်းနားထောင်ဖို့ဆိုရင်၊ Apple ပိုင်တဲ့ Beats ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ နားကြပ်အမှတ်တံဆိပ်ကနေ ရွေးချယ်ဖို့ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိနေပါပြီ။
ယနေ့မှစတင်၍ US ရှိ Apple Store တွင် Beats Fit Pro ကို ဝယ်ယူနိုင်ရုံသာမက ဗြိတိန်၊ အိုင်ယာလန်၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ဂျာမဏီ၊ နယ်သာလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ စသည့် နိုင်ငံအများအပြားတွင်လည်း မှာယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဆွီဒင်၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ ဂျပန်၊ စင်ကာပူ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ Espana.
လွန်ခဲ့သည့်လအနည်းငယ်က Apple သည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီ Beats မှ ကြိုးမဲ့နားကြပ်မော်ဒယ်အသစ်ကို ၎င်း၏ မူရင်းနိုင်ငံ၌ စတင်ရောင်းချခဲ့သည်။ Beats Fit Pro အတွက်. နားအတွင်းပိုမိုလုံလုံခြုံခြုံ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော ကွေးညွှတ်နိုင်သော တောင်ပံအကြံပြုချက်များပါရှိသော အားကစားအတွက် စံပြအသစ်။
၎င်းသည် Beats မော်ဒယ်နှင့် ဆင်တူသည့် လက္ခဏာများ ပါဝင်သော အသစ်ဖြစ်သည်။ AirPods Pro ကို“ပွင့်လင်းမြင်သာမှု” မုဒ်ဖြင့် တက်ကြွသော ဆူညံသံများကို ဖျက်သိမ်းခြင်းအပါအဝင်၊ တက်ကြွသော ဦးခေါင်းခြေရာခံသည့် spatial အသံ၊ တစ်ချက်ထိ တွဲချိတ်ခြင်းနှင့် Apple စက်ပစ္စည်းများအကြား အလိုအလျောက်ပြောင်းခြင်းအတွက် H1 ချစ်ပ်၊ Hey Siri ပံ့ပိုးမှု နှင့် အခြားအရာများ ပါဝင်သည်။
Beats Fit Pro တွင် အားသွင်းတိုင်း နားထောင်ချိန် ခြောက်နာရီအထိ၊ Android စက်ပစ္စည်းများနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု၊ IPX4 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ချွေးနှင့်ရေခံနိုင်ရည်၊ USB-C အားသွင်းအိတ်၊ အရွယ်အစားရွေးချယ်စရာသုံးမျိုးဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သော ဆီလီကွန်နားရွက် အကြံပြုချက်များ စသည်ဖြင့် ပါရှိသည်။
Beats Fit Pro ကို အနက်၊ အဖြူ၊ ခရမ်းရောင်နှင့် မီးခိုးရောင် ရွေးချယ်မှုများဖြင့် Apple Online Store မှ ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါပြီ။ သူတို့က ဈေးပေးတယ်။ 229,95 ယူရို လကုန်တွင် ပို့ပေးပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » ပစ္စည်းများ » Beats Fit Pro ကို US ပြင်ပတွင် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
မျက်နှာပြင်ပါရှိသော HomePod mini ၏ သရုပ်ဖော်ပုံ ပေါ်လာသည်။
Apple Car ပရောဂျက်တွင် နောက်ထပ်နိမ့်ပါးမှုတစ်ခု